လေဒီပိစိလေးတွေကို ခြေသည်းနီ မဆိုးပေးပါနဲ့ - Hello Sayarwon
လေဒီပိစိလေးတွေကို ခြေသည်းနီ မဆိုးပေးပါနဲ့
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 06/07/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
မေမေတွေ လက်သည်းနီဆိုးနေတဲ့အခါ၊ တီတီတွေ လက်သည်းနီဆိုးချင်တဲ့အခါ မီးမီးလည်း ဆိုးချင်တယ်ဆိုပြီး လာကပ်ချွဲတဲ့ လေဒီပိစိလေးကို လက်သည်းနီ ခြေသည်းနီတွေ ဆိုးပေးဖြစ်လား။ လေဒီပိစိလေးတွေရဲ့ ပြည့်ဖောင်းနေတဲ့ လက်လေးတွေ ခြေထောက်လေးတွေက လက်သည်းနီ၊ခြေသည်းနီတွေနဲ့ လိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် မဆိုးပေးဖို့ ပြောပါရစေ။
မိဘ တော်တော်များများက ဘေဘီလေးတွေရဲ့ ခြေသည်းလက်သည်းလေးတွေမှာ လက်သည်းနီဆိုးပေးတာက ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်ရှိစေမယ်လို့ ထင်မထားကြပါဘူး။ အချို့ဆို ဘေဘီလေးနဲ့ လိုက်အောင်ဆိုပြီး အရောင်တောက်တောက်လေးတွေတောင် ဝယ်ပေးတတ်ပါသေးတယ်။ တကယ်ကတော့ လက်သည်းနီဆိုးတာက လေဒီပိစိလေးတွေအတွက် တော်တော်လေး အန္တရာယ်များတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
လေဒီပိစိကို လက်သည်းနီ မဆိုးပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း
လက်သည်းနီက လူကြီးတွေမှာတောင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နုနယ်သေးတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေမှာ ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောနေစရာတောင် မလိုအောင်ပါ။
လက်သည်းနီ ဆိုးတာက တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ ကင်ဆာရောဂါ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပြဿနာ နဲ့ အခြားသော ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လက်သည်းပေါ်မှာတင် ဆိုးတာလေ ဖြစ်စရာမရှိဘူးလို့ ထင်စရာရှိပေမယ့် ကလေးက လက်သည်းကို ကိုက်ရင်း ပါးစပ်ကနေတဆင့် ဝမ်းထဲကို လက်သည်းနီစလေးတွေ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုရောက်ရှိမှုက အစာခြေစနစ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးတွေမှာ အစာခြေစနစ်က ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့ရော၊ ဦးနှောက်နဲ့ ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ပါ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးနေတာပါ။
ဒါကြောင့် လေဒီပိစိလေးကို လက်သည်းနီ မဆိုးပေးတာက အကောင်းဆုံးပါ။ လက်သည်းနီမှာ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေ မပါဘူးလို့ ဘယ်လောက်ပဲရေးရေး အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အရာတွေက ပါနေဆဲပါ။
ဒါကြောင့် နုနယ်လွန်းတဲ့ ကလေးငယ်ကို အကောင်းဆုံး ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ဆိုရင် အဆိပ်အတောက်ကင်းစင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးဖို့အတွက်ကလည်း မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလေးကို အဆိပ်အတောက် ကင်းစင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အကောင်းဆုံး ကြီးပြင်းလာစေဖို့ဆိုရင် လက်သည်းနီ မဆိုးပေးပါနဲ့။
လက်သည်းနီတွေက အရောင်အသွေး စုံစုံလင်လင်နဲ့ လှပေမယ့် ဓာတုပစ္စည်းတွေလည်း အများကြီး ပါဝင်နေပါတယ်။ လက်သည်းနီထဲမှာ ဘေဘီလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့
Toluene – Toluene က paint thinner၊ ပြုပြင်ထားတဲ့ ရနံ့၊ သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေ၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေထဲမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဓာတုပစ္စည်း တစ်မျိုးပါ။ Toluene နဲ့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိတွေ့မှုက အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သလို အာရုံကြောစနစ်နဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း အထက်ပိုင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
Triphenyl phosphate ( TPHP) – လက်သည်းနီ အများစုမှာပါတတ်တဲ့ TPHP ပလပ်စတစ်တွေ ထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ။ ရေရှည်မှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာ တော်တော်များကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Formaldehyde – Formaldehyde က ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း တော်တော်များများမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ လက်သည်းနီတွေမှာတော့ Formaldehyde ကို လက်သည်းနီတွေ မကွာထွက်စေဖို့ အသုံးပြုကြတာပါ။ ဒါက ကြာရှည်ထိတွေ့မိတဲ့အခါ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပြဿနာ ခံစားရနိုင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Phthalates – Phthalates ကို ရနံ့တာရှည်ခံစေဖို့ အသုံးပြုကြသလို လက်သည်းနီ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ခံစေဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ငယ်စဉ်မှာ ဒီဓာတုပစ္စည်းနဲ့ ထိတွေ့မှုများတာက ကလေးကို ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးစေပြီး ဓာတ်မတည့်မှုရောဂါတွေ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘေဘီလေးတွေကို အဆိပ်အတောက်ကင်းစွာနဲ့ ကြီးပြင်းလာစေဖို့ လက်သည်းနီ မဆိုးပေးကြဖို့ ပြောပါရစေ။
Is Applying Nail Polish on Babies and Toddlers Safe? https://parenting.firstcry.com/articles/is-applying-nail-polish-on-babies-and-toddlers-safe/ Accessed Date 11 June 2020
Is It Safe to Paint Your Toddler’s Nails? https://www.verywellfamily.com/painting-toddlers-nails-290008 Accessed Date 11 June 2020
You May Want To Think Twice Before Putting Nail Polish On Your Toddler https://www.moms.com/is-nail-polish-safe-for-toddlers/ Accessed Date 11 June 2020
ခြေသည်းလက်သည်းလေးတွေ ကျန်းမာစေဖို့ ဘာတွေစားရမလဲ
ကလေးတွေမှာ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ လက်သည်း၊ခြေသည်းပြဿနာတွေ
သင်သတိမထားမိတဲ့ လက်သည်းနီရဲ့ အန္တရာယ်